Daawo, Wasiir Maxamuud Xaashi oo Fariin hawada usoo mariyey Beesha Ciise muuse + Hadal uu ka yidhi Iibka dakada | Berberatoday.com
Daawo, Wasiir Maxamuud Xaashi oo Fariin hawada usoo mariyey Beesha Ciise muuse + Hadal uu ka yidhi Iibka dakada
Hargeysa (Berberatoday.com) Wasiirka Wasaarada Madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sharaxaad ka bixiyey go’aan ay maanta Golaha Wasiirkada ee Somlailand ku ansixiyeen Heshiiska maalgashiga dekeda Berbera ee Xukuumaddu ay la gashay shirkada DP World.
“ Golaha Wasiirada waxay ay maanta ansixiyeen oo aanu soo hor dhignay hesiishkaas, waxa Xukuumadda kala shaqaynaya khuburo caalamiya oo badan, waxana aanu galinay aduun badan maadaa oo uu yahay heshiis culus oo loxodan, Somaliland-na aanay hore khibrad ugu lahayn. Waxaas oo khubaro ah waxaanu lacagta u galinaynay in aanu galno heshiis sugan, cad oo aan muran badan abuurin isla markaana bad siman salka ku haya, oo maslaxadeena ka turjumaya, aad baanu ugu qanacsanahay.”
” Hesiishkan Xukuumadda Somaliland ee Axmed Siilaanyo Madaxweynaha ka yahay, xaq ayey u lahayd inay gasho oo saxeexdo, qaanuun iska kaayo hor taagayaana ma jiro, dastuurka qaranka waxa ku xusan si cad in Xukuumaddu ay kirayn karto ama ay iibin karto hantida ay masuulka ka tahay, Xukuumadii la doortay ee Umadda kalsoonideeda haysata ayaanu nahay. Maadaama ay maanta golaha Wasiiradu ansixiyeen heshiishkaasi, waxanu gayn doonaa Golaha Wakiilada, sharaxaad badan ayaanu ka bixin doonaa, waxana aanu rajaynaynaa inuu hesiiskaasi meel mari doono Hadii EEBE idmo.” ayuu yidhi Mudane Maxmauud Xaashi.